थानकोट कलंकी बाटो हो कि धराप
कलङकी–नागढुङगा खण्डमा सडक विस्तार गर्ने कुरा वर्षौं भए पनि असरल्ल छ । यो बाटो बिस्तारको काम रोकिएको छ र यो मार्गमा दैनिक चल्ने ट्रक, बस, अन्य सवारी साधनका कारणले बटुवाका लागि धराप बन्न पुगेको छ ।
हरेक दिन दुर्घटना हुन्छ, धुलो छ, धुवाँ छ र मान्छे मरिरहेका छन् । अहिले आएर बिस्तार छाडेर पिच गर्ने आदेश भएछ । बिस्तार रोकिने भए किन घर टहरा भत्काउन लगाइयो, पिच गरेको भए हुन्थ्यो । बिरुतार सुरु गरिसकेपछि युद्धस्तरमा यो बाटो बनाए हुनेथियो। ३ महिनाको काम ३ वर्षमा पनि असरल्ल ?
सडक बिस्तार विवाद छ । सरकार नै स्पष्ट केही भन्दैन, केही गर्दैन । आफ्ना परे अथवा पैसा पाए एउटा चिन्हो, नपाए मनलागी गर्नाले विवाद बढेको हो । अर्कोकुरा जनताको सम्पत्ति लिन क्षतिपूर्तिको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सरकारले गर्न सकेन । अदालतले क्षतिपूर्ति दिनु भन्दा सरकार पछि हट्यो ।
त्रिपुरेश्वर कलंकी खण्डमा कांग्रेसका नवीन्द्रराज जोशीले रोक्ने, कलंकी थानकोट ११ किलोमिटर मार्गमा ठेकेदार र सडक विभाग कमिशनमात्र खान खोज्ने, अनि विकास कसरी हुन्छ ? कमिशनका लागि विस्तार रोकेर जति हुनसक्छ त्यति पिच गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ सडक विभागले । १२ किलोमिटर सडकमा १२ सय समस्या, समस्या कर्मचारीले सिर्जना गरेका हुन् विधि नमानेर ।